कोरोनाको कहर : खाना र स्वास्थ्य विकासमा लाग्न कठोर संदेश – माहुरी . Bee
यतिखेर कोरोना भाईरसले विश्वलाई आक्रान्त पारेको छ । चीनको हुवान भन्ने ठाउँमा देखिएको यो भाईरसले विश्वका छयालीस हजारभन्दा धेरै मानिसको अकालमा ज्यान गईसकेको छ भने संक्रमित र मारिनेहरुको संख्या क्रम तिब्र छ । पछिल्लो समय ईटली, स्पेन, अमेरिका, वेलायत लगायतका मुलुकमा मर्नेहरुको संख्या हेर्दा अवस्था नाजुक देखिन्छ । यो कोरोना भाईरसबात बाँच्नेहरूले पनि दुख पाएका छन; विश्व अर्थतन्त्र नै ताला लागेको अवस्थामा छ । मसंग प्रविधि, पैसा र उद्योग छन भनेर डुक्रनेहरुलाई पनि सवक सिकाईदिएको छ । तिनको बिकास मोडेलको औचित्यमाथि प्रश्न लगाईदिएको छ । सडकहरु ठप्प छन, भाईरस नफैलियोस भनेर मानिसहरु घरका कोठाहरुमा कैद भएका छन । आजसम्मको स्वास्थ्य उपचार विधिले कोरोनाको उपचार नहुने देखिए पछि मानिसहरु कोठा बन्द बनाईएक हुन । सर्वत्र चरम अभाव छ ।
ठूला भनिने ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बन्द हुन सक्ने कोलाहल मच्चिएको छ । यतिखेर स्वास्थ्य उपचार र खाध्य उद्योग बाहेक सबै बन्द छन । त्यसमा सुचना प्रविधिसंग सम्बन्धित उधोगहरूलाई खासै फरक परेको छैन । गूगल, फेसबुक, ट्विटर, माईक्रोसफ़्ट, एप्पल, सामसुङ्ग आदिका सफ़्टवेअर मजाले चलेका छन । ल्यापटप र मोवाईलमै दुनिया त सिमित छ तर खानेकुरा र स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता झन् खडकिएको छ । यसमा स्वच्छ सूचनाको आवश्यकता त हुन्छ नै ।
अहिले फैलिरहेको कोरोनाको महामारी र सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले के देखायो भने बिकासको मोडेल अपुरो छ, त्रुटिपूर्ण छ । अन्य उधोगधन्दा नभए पनि खासै फरक नपर्ने तर खाना र उपचारको विकल्प नहुँदा मानिसले तत्काल मृत्यू वरण गर्नुपर्दोरहेछ भनेर जानियो । हुन त विगतका अझै कहाली लाग्दा महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र विश्व युद्धहरुले चेतना हुनेहरुलाई त्यस्तो संदेश त दिएकै हुन तर मानिसले मानिसमाथि नै संकट थुपार्ने बिकासलाई उपयुक्त ठानियो । त्यसैले बिकासको केन्द्रमा मानविय कल्याण हुनु पर्छ नकि नाफा र कोरा आर्थिक वृद्धि । नाफाले मानविय कल्याणलाई समाप्त पारिदिन्छ भने आर्थिक वृद्धिको अवधारणामा को कति दुखि वा सुखी छ भनेर केलाउन सकिन्न । यसरि बुझ्न सकिन्छ कि बिकास मानिसका लागि हो कि नाफाका लागि ? हामीले गर्व गर्ने अहिलेको विकासले आज पनि विश्वका आधा जनसंख्यालाई भोक भोकै सुत्न्न बाध्य पारेको छ ।
त्यसैले यस्ता संकटहरुका कारण आउने दिनमा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था अझै भयाबह हुने देखिएको छ । त्यसको समाधानार्थ पुरानो बिकासका मान्यताहरु माथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता शास्वत रुपमा झन् बढेर गएको छ ।
Tagged आर्थिक मन्दी, आर्थिक वृद्धि, कोरोना भाईरस, नाफा, प्रवासी नेपाली, महामारी, मानविय कल्याण, सूचना प्रविधि
Previous Postअब हामी माहुरी भएका छौं
Next Postकोरोना महामारी व्यवस्थापन क्षमता कसको कति ?